Unyana osisigidigidi kwiNoveli yoMthetho Isahluko 2756 - 2757 | XperimentalHamid
Unyana osisigidigidi kwiNoveli yoMthetho Isahluko 2756 - 2757
funda Isahluko 2756 - 2757 yenoveli Unyana osisigidi eMthethweni by INkosi igqabi simahla kwi-Intanethi.
Ukuva oko kuthethwa nguMelba, uPollard akazange abuye.
Ukhuphe engazi kwaye wabuza: “Ngaba awuwathandi amantombazana ?! Awuwathandi amantombazana, ngaba usawathanda amakhwenkwe ?! ”
UMelba wayengalindelanga ukuba utata wakhe angabonakala othukile akuva le mpendulo, kwaye akakwazanga ukuzibuza: “Tata… ngoko ucinga ukuba ndingathanda amakhwenkwe okanye amantombazana?”
UPollard waqaqamba kwangoko, wathi ngolonwabo, "Ngokombono wokuba ngutata, ewe, ndisawathanda amadoda kuwe, umntwana kwikamva ubhetele!"
Emva kokugqiba ukuthetha, ukhawulezile wajonga uCharlie wathi: “Charlie, ulibale intombazana egama linguZhiyu, nceda ubone ukuba zikhona na iitalente ezisencinci ezifanelekileyo ezikungqongileyo, ukuba ikhona, zibazise eMelba!”
UCharlie wancuma kancinci, wanqwala, wathi: "Kulungile, ndiza kunika ingqalelo xa kufika ixesha." UMelba wathetha ngendlela engathandekiyo: “Tata, andinazicwangciso malunga noku, okwangoku, uMnu Wade uzibeke emngciphekweni wokundisindisa kule ngozi, kusoloko kufuneka ndigxile emsebenzini, ndilinde iminyaka emibini ndithandane nemicimbi yothando. . ”
UPollard wathi ngoncumo: “Owu, okoko nje usithi uyawathanda amakhwenkwe, ke intliziyo yam iziva ikhululekile, linda iminyaka emibini ulinde eminye iminyaka emibini, utata akangxami!”
Emva koko, wagalela iglasi yewayini ngokungxama, wathi kuCharlie: “Yiza Charlie, sela noMalume. Namhlanje ulonwabo oluphindwe kabini, ulonwabo oluphindwe kabini lulapha!
UCharlie ngokwendalo wayesazi ukuba kutheni uPollard onwabile, wancuma wathatha iglasi yakhe, wathi: “Kuba uMalume onwabile, ndiza kusela ezinye iiglasi.”
Wayenxilile emva kokutyhala ikomityi yokugcwalisa okulandelayo kwaye ke.
Ngexesha lokugqibela ukutya bekugqityiwe, ebesele edidekile.
Ukubona ukuba ukutya sele kuphantse kwatyiwa kwaye iwayini iphantse yasela, uCharlie wathi kuMelba, “Melba, bekumnandi ukuba lapha namhlanje, ndiza kucela i-Orvel ukuba ikuthumele ekhaya kunye noMalume, kwaye niyakuphumla kamnandi xa buya umva."
UMelba wanqwala kancinci, wabuza: “Mnu. Wade, unayo ixesha namhlanje ebusuku? Ndifuna ukukumema kwisidlo sedwa ukuze ndivakalise umbulelo wam. ”
UCharlie wawangawangisa isandla sakhe: “Uyilibale namhlanje, kufuneka uphumle kakuhle iintsuku ezimbini. Kwiintsuku ezimbini, masenze idinga kwakhona. Ngendlela, siza kuba nentetho emnandi malunga namalungiselelo ophuhliso lweshishini lokuthumela elwandle. ”
UMelba uthe, "Yiyo leyo, ndiza kulinda umyalezo wakho."
UPollard uthe enxilile ngeli xesha, “Charlie ..… Wena… ungumntu ohloniphekileyo… kwixa elizayo, wena, okanye inkampani yokuhambisa ngenqanawa elwandle, unokusebenzisa umalume wakho… thetha nje!
UCharlie wanqwala kwaye wancuma: “Kulungile Malume, ungakhathazeki, kuzakufuneka ndikuphazamise kwixa elizayo.”
UPollard uphendule ngoko nangoko, “Yintoni ingxaki? Inokuba yintoni ingxaki apha? Kodwa iMelba kuya kufuneka ikukhathaze kakhulu kwixa elizayo. Khathalela, lo mntwana ukrelekrele okanye ukrelekrele kwaye unolwazi oluninzi, kodwa ngenxa yokuba engenamava entlalontle kunye nenyani, ndiyoyika ukuba unamehlo aphezulu kwaye unesandla esiphantsi, ngoko ke akufuneki umkhathalele kakhulu ngelixa elizayo. Ukuba usebenze kakuhle, ungatsho kwaye wenze okungakumbi. ”
UCharlie wahleka wathi: “Malume, ndiyakholelwa ukuba uMelba uyasihlangula.”
UPollard ukhalaza: ”Kulungile kwaye kungcono ……“
Emva koko, emva kokujonga uCharlie, wayengazi ukuba zeziphi iitoni ezingahambelaniyo. Ngesiquphe wancwina, “Hee! Usandula ukutshata kwangethuba, kungenjalo, ukuba unokuba ngumkhwenyana wam, andizukuba naxhala ngaye… ”
UMelba uqhwanyaze kwangoko: “Tata, uthetha ngantoni…”
UPollard wahleka kabini, wathi: “Ndiyasela kakhulu, kodwa ndiyancwina yimvakalelo yam!”
UCharlie wathi ngoncumo: “Njengokuba unxilile kakhulu, ndiza kukuthumela ukuba uphumle kuqala.”
Emva koko, wabiza u-Orvel, u-Orvel makaqhube, wathumela uPollard noMelba ekhaya.
Emva kokuba u-Orvel ehambile, uCharlie waziva enexhala. Wayengazi nokuba makaye kuqala ekhaya okanye aye eShangri-La ayokuthatha ukuphumla.
Uye wabiza u-Issac wambuza: "Xhego, umkile umama ka Ruoli?" U-Issac ungxamile wathi, “Mhlekazi, ndisandula kufumana ingxelo evela kwabaphantsi ukuba iRomany sele ithathe ihelikopta yaya kwisikhululo seenqwelomoya. Kuqikelelwa ukuba angafika eAurous Hill malunga neeyure ezine. ”
UCharlie ubala ixesha kwaye wathi liyakhawuleza nokuba lingaphezulu kweeyure ezintathu. Akukho sidingo sokuphosa ikhaya kwakhona. Emva kwayo yonke loo nto, umfazi wakhe akufuneki abekho ekhaya ngeli xesha.
Ke waqhuba ngqo wabuyela eShangri-La, ecwangcisa ukuphumla kwaye alinde ukufika kwe-Roma.
Ngaxeshanye. UChengfeng wayelinde impendulo kaZynn, kwaye wayedlala isigubhu entliziyweni yakhe.
Siyavakala isizathu sokuba uZynn aye ku-Ito Yuihiko ngale ntsasa, kwaye ngoku lixesha lesidlo sasemini, nokuba iintetho zakhe no-Ito Takehiko zihamba kakuhle na okanye hayi, kufuneka asoloko emnika ingxelo ngenkqubela phambili.
Wakhupha ke umnxeba wafowunela uZynn.
Isikhumbuzo esibandayo sivela kwelinye icala lefowuni: "Uxolo, umsebenzisi omfowunileyo ucinyiwe."
Intliziyo kaChengfeng yavele yabetha ngesiquphe!
“Yinto embi leyo!” Uye wadanduluka wathi, "UZynn mhlawumbi usengozini!" Umngcamli u-Anson ungxamile wakhupha ifowuni yakhe wathi, "Ndizakufowunela inkosi yenkwenkwana."
Emva kokuthetha, umnxeba ophathwayo wakhawuleza wakhuphela ngaphandle. Ukukhawuleza kokuvalwa kweza kungekudala.
Ukuthetha kwakhe kutshintshile kwaye wenza iminxeba eliqela ngokulandelelana, kodwa iziphumo bezifana.
Uvalo ke luthi: “Mfundisi, bobane bacinyiwe…” wangcangcazela uChengfeng wathi: “Kuphelile! Idlulile! Inokuba uwele ezandleni zabanye njengoShoude. ” … .. ”
U-Anson ubuze esoyika, “Le… yintoni indoda enkulu e-Aurous Hill?! Ingaba kusenokwenzeka ukuba usapho lakwaWade lwenza isiporho ngasemva?! ”
UChengfeng wafinga iintshiya wathi, “Khawulezisa ulungiselele umntu. Jonga ukuba uZynn uyishiyile iShangri-La ngaphambi kokunyamalala kwakhe. Ukuba akunjalo, isandla sosapho lakwaWade ngokwendalo sisesona sikhulu! Kufuneka ndibuze uZhongquan ukuba andinike ingcaciso! ”
Ngokukhawuleza uAnson wazama ukufumana indlela yokufumana ubudlelwane. , Khangela umkhondo we-Zynn.
Kungekudala, zabuya iziphumo, kwaye yonke imiba ibonakalisile ukuba uZynn akashiyanga iShangri-La namhlanje.
Oku kwamenza uChengfeng waba nomsindo ngoko nangoko.
Wayengalindelanga ukuba usapho lakwaWade lube nobuganga bokuhlasela ngokuthe ngqo unyana wakhe.
Ngapha koko, okoko uZynn wabanjwa lusapho lakwaWade, ikwanjalo neShoude 90%!
Emva koko, wenza umnxeba ngokuthe ngqo kuZhongquan.
Yathi yakudibana ifowuni, kwavakala ilizwi likaZhongquan lisithi: “Owu, kutheni eza kunditsalela umnxeba uMzalwana uSu?” UChengfeng uqalekise ngomsindo wathi: “Zhongquan! Musa ukuzonwabisa usondele kum, ndiza kukubuza, malunga nonyana wam. Uphi uZynn?! ”
UZhongquan ebengalindelanga ukuba uChengfeng angafunga xa sele eza kuvela, wabuza ebandayo wathi: “Injani intlekisa! Ndingaqiniseka njani ukuba uphi unyana wakho? ”
UChengfeng utshixizise amazinyo akhe wathi: “Yeka ukuzenza ngathi andizami ukundibhida! UZynn phezolo ehleli eWade Family's Shangri-La Hotel eAurous Hill, unyamalale ngokupheleleyo emva kokuvuka ngale ntsasa. Ngubani omnye oyenzileyo ukuba awuyenzanga?! ”
UZhongquan wothuka ngequbuliso.
Ubuze engazi ukuba: "Chengfeng, yithathe ngokungathí sina le nto?"
UChengfeng uqalekisile: “Ububhanxa! Ndingathetha njani nobubhanxa bakho? Ukuba awundiniki ngcaciso ngalo mbandela, ndiza kukuvumela ukuba ulwe nobomi bakudala. Intsapho yakwaWade iza kuhlawula eli xabiso! ”
UZhongquan waphantse wagqiba entliziyweni yakhe ukuba lo mbandela kufuneka unento yokwenza noCharlie.
Nangona kunjalo, ngokwemvelo wayengenakuthetha ngqo noChengfeng, ke wathi: “Chengfeng, ndingafunga kuThixo ngale nto uyithethileyo, andazi kwanto! Kwaye andikaze ndayalele mntu ukuba enze nantoni na kunyana wakho! Njengokuba usithi umntu lowo unyamalele eShangri-La wosapho lwam eWade, linda ke ndide ndibuze imeko ethile kuqala, kwaye emva kokuba ndiyiqondile imeko leyo, ndiza kukunika inkcazo! ”
Unyana osisigidigidi kwiNoveli yoMthetho Isahluko 2754 - 2755
Unyana osisigidigidi kwiNoveli yoMthetho Isahluko 2758 - 2759